Afofandiovana, Famelan-keloka, Vokany – 2trondro
Home / Famonjena / Afofandiovana, Famelan-keloka, Vokany
... na, Inona ny milay dia Afofandiovana?
Vokany? Misy hatrany ny vokany!
Afofandiovana dia tsy hafa tany an-danitra na ny helo. Izy io dia tsy maharitra fanjakana alalan 'izany ny sasany fanahy dia tsy maintsy mandalo ny handray ny fanadiovana farany alohan'ny hidirana any an-danitra (jereo ny Bokin'ny Apokalypsy 21:27). Araka ny Filan-kevitry ny faharoa tao Vatikana dia nampianatra, misy ny afofandiovana, satria “na dia ny heloka ny amin'ny fahotana efa nesorina, fa na sazy ny vokatry ny mety mbola ho expiated na voadio” (WE 3).
Toy izany koa, ny Katesizin'ny Fiangonana Katôlika firenena, "Izay rehetra izay maty ao amin'ny fahasoavana sy ny fisakaizana, nefa dia mbola tsy voadio, ireo tokoa antoka ny famonjena mandrakizay; fa aorian 'ny fahafatesana izy ireo maintsy fanadiovana, mba hahazoana ny fahamasinana ilaina hidirana ao amin'ny hafalian'ny lanitra " (1030, t. 268). "In afofandiovana,"Manoratra mpiaro ny finoana Karl Keating, "Sisa rehetra ny fitiavana ny tena mampiova ny endriny ho fitiavana an'Andriamanitra" (Fivavahana Katolika, t. 190).
Maka zava-dehibe ny Fiangonana i Jesoa’ didy in Matthew 5:48 mba "ho tonga lafatra, tahaka ny any an-danitra izay lavorary,"Ary mihazona mafy Ny Taratasy ho an'ny Hebrews'12:14 izay mampianatra, "Miezaha ho an'ny fihavanana amin'ny olona rehetra, sy ny fahamasinana raha tsy izay tsy hisy hahita ny Tompo. "
Koa, ny Fiangonana mandray ny fahamarinana ara-baiboly fa ny fahalavorariana ara-panahy takiana ho entina any an-danitra, fa isaky ny ny ambony momba ny Boky ny Apokalypsy (21:27), "Maloto na inona na inona no hiditra izany."
Raha ny tena izy, Ny fandavana ny hamela an'i Mosesy mba hiampita ho any amin'ny Tany Nampanantenaina ho sazy noho ny fanitsakitsaham-bady no mifanaraka amin'ny finoana ity (jereo Deuteronomy 32:48).
Toy izany koa, iray amin'ireo kokoa ireo tantara ao amin'ny soratra masina zavamaniry tsara maneho hevitra izany famelan-keloka sy ny vokany. Izany no tantaran'i Davida tsara fanahy sy Natana mpaminany rehefa miresaka momba misdeed Davida tamin'i Batseba ao amin'ny Faharoa Bokin'i Samuel, 12:1-14:
Famelan-keloka sy ny vokany
Ny tantaran'i Davida sy Batseba sy Natana dia milaza amintsika betsaka momba ny toetry ny fahotana sy ny famindram-pon'Andriamanitra. David, dia ny Tompo malala mpanjaka sy afaka toa tsy hanao ratsy, nanao fahotana mahatsiravina. Andriamanitra dia dodona sy vonona hamela heloka, ary hamerina amin'ny laoniny, nefa tsy maintsy ho vokany.
Vokany noho ny ota sy ny vokatry ny fahotana dia matetika adihevitra Kristianina. Mety hanontany tena, inona marina no vokatry sy ny vokany raha toa, raha ny tena izy, nanonitra ny fahotana rehetra dia teo amin'ny hazo fijaliana? Izay fahotana rehetra mbola nisy nataony tamin'ny olona no nanonitra tamin'ny nanaterany ny Kristy, nefa tsy midika fa ny vokatry ny fahotana dia negated–tsy azo antoka eto amin'ity fiainana ity. Eritrereto ny isaina ny fahotana (sy ny heloka bevava) toy ny famonoana olona, fandoroana sy ny fanafihana. Be izy rehetra, maharitra eto an-tany fiantraikany. Noho izany, famelan-keloka avy eo, dia tsy voatery midika fa ny vokany dia esorina.
Famelan-keloka, nefa Sazy
Mba hahatakarana ny fomba mety mbola sazy na dia ny Olona Iray Aorian'ny Voavela ny helony, dia ilaina ny manavaka mandrakizay ary ara-nofo sazy.
The mandrakizay sazy noho ny ota ny helo. Ny iray dia vonjena ho afaka amin'ny famaizana avy amin'Andriamanitra izany rehefa–ny mpanota–mibebaka sy miaiky ireo fahotana. Nefa na dia efa olona voavela, ara-nofo sazy dia mety mbola izay ihany koa dia tsy maintsy ho expiated.
Diniho, ohatra, ny lahy izay mivadika amin'ny vadiny. Feeling nenina, dia mamaha ny hanova ny lalany, ary hiaiky izay nataony. ny vadiny, tao amin'ny hatsaran-toetra, mamela heloka azy, na izany aza, dia mety ho ela talohan'ny izy hatoky azy indray. Izy indray dia mila ny fahatokiana, azy ho sitrana izay nahatonga ny fifandraisana. Rehefa manota isika dia manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny hafa.
Ireo ratra tsy maintsy ho sitrana eo anatrehan'i iray miditra any an-danitra. Mazava ho azy, izany fanasitranana miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ny alalan ' ny fahamendrehan 'i Jesoa Kristy ho faty teo amin'ny Hazo Fijaliana. Afofandiovana, anefa, ary koa ny ny fivalozana ataontsika eto an-tany, dia ny lalan'Andriamanitra ny mamela antsika handray anjara amin'ny dingana fanasitranana rehefa mandray andraikitra ny ratsy nataontsika.
To ho mazava, Afo fandiovana dia tsy misy ifandraisany amin'ny famelan-keloka ny fahotana, satria ny heloky ny fanahy ao amin'ny afofandiovana efa voavela heloka. Noho izany, dia diso ny milaza ny Fiangonana ny fampianarana momba ny afofandiovana tafiditra karama Ny famelan-keloka. Indray, ireo fanahy voavonjy, fa ny fidirana any an-danitra dia tara. Araka ny Saint Paul dia nanamarika tao amin'ny Taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina, “Rehefa hotsaraina araka ny Tompo, isika, dia faizan'ny ka mba tsy hohelohina miaraka amin'izao tontolo izao.” “Fa Jehovah hananatra azy hoe iza izy tia, ary nibedy izay zanaka rehetra mandray” (jereo ny Taratasy ho an'ny Hebrio 12:5-6 ary 5:8-9).
Carl Adama angamba nanome ny tena famaritana ny afofandiovana succient toy izao manaraka izao;
Ny mahantra fanahy, rehefa tsy hampiasa ny mora kokoa sy sambatra kokoa fivalozana avy amin'izao tontolo izao, dia tsy maintsy miaritra rehetra izao ny fangidian'ny-dalàna sy ny sazy izay voatery nifatotra ny lalàn'Andriamanitra setrasetraina ny rariny na dia ny kely indrindra fahotana, mandra-efa nanandrana ny fahoriako ny ota ho amin'ny faikany, ary efa very na dia ny kely indrindra miraiki-po aminy, mandra-tonga lafatra ny fitiavan'i Kristy. Izy io dia lava sy maharary dingana, "Ka amin'ny afo." Moa ve tena afo? Tsy fantatray; izany tokoa ny tena maha foana foana miafina amintsika eto amin'ity izao tontolo izao. Fa fantatsika izany: fa tsy misy sazy mamotsitra mafy amin 'ny "mahantra fanahy" toy ny fahatsiarovan-tena fa izy ireo noho ny fahadisoana ela debarred avy ny fitahiana fahitana an'Andriamanitra. Arakaraka disengaged izy ireo tsikelikely ao amin'ny kompà rehetra ny maha avy amin'ny tery tenanareo, ary ny malalaka sy tanteraka kokoa ny fony dia misokatra ho an'Andriamanitra, mainka fa ny fangidian'ny ny fitokanany spiritualized sy niova tarehy. Izany dia noho ny fanembonana te-hody Ray; ary ny koa ny fanadiovana vola, ny fanaintainana kokoa ny fanahiny no nokapohina sy ny tsorakazo afo ...
Raha Kristianina rehetra mihevitra ny tenany ho mpanota, tamin'izany andro izany dia mino izy, dia ho afaka ny fahotana (ary na ny fironana amin'ny fahotana) any an-danitra. Noho izany, ny fanadiovana dia tsy maintsy misy dingana aorian'ny fahafatesana, izay ny fanahy mora ota mampiova ny endriny ho olona * impervious azy.
Maro ny andalan-tsoratra masina izay manisy firesahana ny endriky ny fanavotana ny ota aorian'ny fahafatesana.
Ny hevitra Momba ny Afofandiovana ao amin'ny Testamenta Taloha
Ao amin'ny Testamenta Taloha dia misy ny tantaran'i Jodasy Makabeo izay “nanao fanavotana ho an'ny maty, mba ho afaka amin'ny fahotany” (jereo ny Faharoa Bokin'i Makabeo 12:46).
The Bokin'i Ekleziastika, 7:33, firenena, “Omeo-katsaram-panahy rehetra isan'ny velona, ary tsy niaro hatsaram-panahy tamin'ny maty.” na ny Faharoa Bokin'i Makabeo ary Ekleziastika dia hita any amin'ny fito boky Eklesiastika, izay maro tsy mandà ny Katolika. Nefa na dia misy tsy mino boky izany mba ho ara-tsindrimandry avy amin'Andriamanitra, izy, fara fahakeliny, tokony handinika ny vavolombelona ara-tantara izy ireo manome. Dia manamafy ny Israelita fahiny’ fomba fanao ny mivavaka ho an'ny fanahin'ny maty. Izany no motivés ny Faharoa Bokin'i Samuel 1:12, izay milaza amintsika Davida sy ny olony “nisaona sy nitomany sy nifady hanina mandra-paharivan'ny andro ho an'ny (ny miaramila 'ny Tompo) satria lavon-tsabatra ireny.”
Nanononan'i Paoly ny vavaka ho an'ny maty ao amin'ny Taratasy Faharoa ho An'i Timoty, nanao hoe: efa maty ny namana Onesiforosy, “Homen'ny Tompo famindram-po izy mba hahita avy amin'ny Tompo izany andro” (1:18).
Ny tena mazava ao amin'ny Soratra Masina momba ny afofandiovana koa dia avy Paoly Taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina:
Verse 13 manondro ny Andro Fitsarana, raha ny asa izay tsy ho fantatra. ny volamena, volafotsy, ary ny vato soa eo amin'ny andininy faha 12 maneho mendrika hampihatra izay mampihatra asa; ny hazo, misy, sy ny mololo, tsy lavorary asa.
Samy toe-javatra mahakasika ny Kristianina trano teo ambonin'ny fanorenan'ny 'i Jesoa Kristy. Ao amin'ny tranga voalohany, ny asa dia nitondra ny Kristianina eo amin'ny fiainana mbola velona avy fitsarana dia mandeha izy any an-danitra mivantana ny valim-pitia, i.e., ny andininy faha- 14. Ao amin'ny tranga farany, ny asan'ny Kristianina tsy ho tafavoaka velona ary izy “mijaly(s) very,” anefa, ny famindram-pon'Andriamanitra, tsy ny tenany very fa voavonjy “tahaka ny afo” vaovao 15.
In Matthew 12:32 Jesosy dia toa midika misy fanonerana ny fahotana ny fahafatesana any an-dafin'ny: “Na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina dia tsy hahazo famelan-keloka, na amin'izao fiainana izao, na ao amin'ny taona ho avy” (nampiana fanamafisana). Jereo ny Papa Saint Gregory Lehibe, ifampiresahana 4:40 ary Saint Augustin, Ny City 'Andriamanitra 21:24 fa mifandraika amin'ny ara-nofo.
any an-kafa, Jesosy dia midika fa ny sasany amin'ireo ny maty dia hiaritra ambaratonga samihafa ny sazy misy fetra (jereo Luke 12:47-48).
References kristianina voalohany ny Afofandiovana
Soratra ao amin'ny gravesites fahiny toy ny Epitaph ny Abercius Marcellus (toy ny. 190), ohatra, mangataka ny mpino mba hivavaka ho an'ny maty.
Miandry maritiora tao amin'ny trano-maizina tao Carthage tamin'ny taona 203, Vibia Perpetua Nivavaka isan'andro ny rahalahy efa maty ho azy, Dinocrates, rehefa nahazo fahitana azy amin'ny toe-po.
, Taloha kelin'ny nahafatesany, dia nambara taminy fa efa niditra tao am-paradisa. “efa fantatro,” izy nanamarika, “fa efa navoaka ny sazy” (Namonoana an'i Fond sy Felicitas 2:4).
Most lalina, hitantsika ny Kristianina tany am-boalohany ny fanatitra fanao sorona Eokaristika amin'ny anaran'ny maty. Tertullien (D. toy ny. 240), ohatra, nambara ny fomba mpitondratena izay mpivavaka mivavaka ho an'ny fialan-tsasatra ny vadiny fanahiny, ary ahoana no “isan-taona, rehefa mitsingerina ny fahafatesany, dia manolotra ny sorona” (hoe tokony hanambady tokana 10:4).
Tao amin'ny Sacramentary, miaraka amin'ny tapaky ny taonjato fahefatra, Serapion, ny Eveka ny Thmuis, nivavaka Andriamanitra, “amin'ny anaran'ny ny lasa rehetra,” ny “manamasina rehetra izay efa nodimandry ao amin'ny Tompo (Apoc. 14:13) dia hanisa azy rehetra teo amin'ny laharana olonao masina sy nanome azy toerana ka nitoetra (John 14:2) ao amin'ny fanjakanao” (The Sacramentary, Anaphora na Vavaka ny soron'ny Eokaristia 13:5).
Aiza ve ka dia Nandao Anay?
Mety hanontany ny sasany, "Raha tsy maintsy ho tanteraka ny hiditra an-danitra, Iza indray no azo hovonjena?"Rehefa ny Apôstôly Nametraka io fanontaniana io tamin'i Jesosy, Hoy ny navaliny, "Olona izany misy azo atao, fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra azo atao " (jereo ny Matio 19:25-26).
Araka ny Katolika, isika dia milaza fa mety misy amin'ny alalan'ny Afofandiovana.